पार्टी एकता खलबल्याउने तत्वहरु सक्रिय भए: प्रधानमन्त्री ओली [भिडियो] - Damak No.1 Online Patrika
पार्टी एकता खलबल्याउने तत्वहरु सक्रिय भए: प्रधानमन्त्री ओली [भिडियो]
प्रकाशित मिति : शनिबार, जेष्ठ १८, २०७६
प्रचण्डको अन्तवरार्तापछि ओलीको अन्तरवार्ता लिएका धमलाले ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए–तपाईलाई जनताले पाँच वर्षको लागि म्याण्डेट दिएको हो नि, तपाईले बिचमै छोड्ने सहमति भएको हो र ?
ओलीको जवाफ यस्तो छ–यसमा म अहिले छलफल गर्न चाहन्न । यो सहमति के कस्तो भएको हो ? भन्ने कुरा सहमतिमै उल्लेख छँदैछ । र, अभिप्राय के हो ? भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ । यतिवेला यो चर्चा गर्ने, मैले आज विहानपनि एउटा सञ्चारमाध्यमलाई भनें तपाईहरुलाई खुशी लाग्छ भने म चार पाँच दिनमात्रै हो, चार पाँच दिनपछि हटिहाल्छु भन्दिन्छु । देशको विकासप्रति चिन्ता नहुने, त्यसतर्फ बहस नगर्ने, विकास कसरी हुन सक्छ ? स्थिरता र स्थायित्व कसरी हुन सक्छ ? त्यतापट्टि नहुने । मलाई आश्चर्य लाग्छ । हरेक कुराको विरोध हुनुपर्ने । नराम्रो भन्नुपर्ने । यस देशलाई माया गर्ने र देशलाई राम्रो होस भन्ने कुरा खोई ? कतिपय मान्छेहरुको प्रवृत्ति म देखिरेको छु, त्यसमा मेरो खास टिप्पणी केही पनि छैन् ।
धमलाले ओलीलाई प्रचण्डसँगको सम्बन्धको बारेमा प्रश्न गर्दा एकता खलबल्याउने तत्वहरु सक्रिय भएको आरोप लगाए । उनले भने– केही सहमतिहरु भएर नै एकता भएको हो । र, एकता भएपछि एकताबद्ध रुपमा पार्टी अघि बढेको छ । त्यसलाई कमजोर पार्नेगरि, एकता खलबलाउनेगरि केही चर्चा गर्नुपर्ने त आवश्यकत्ता छैन् । जे सहमति भएका छन् । ती सबै आफ्नो बाटोमा र कोर्समा अघि बढ्छन् ।
धमलाले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रचण्डसँग उनकै निवासमा पुगेर अन्तरवार्ता लिएका थिए भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा पुगेको ओली फर्कने क्रममा हवाइजहाजभित्रै अन्तरवार्ता लिएका थिए ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकता घोषणा हुनुभन्दा एक दिनअघि ०७५ साल जेठ २ गते प्रचण्ड र केपी ओलीवीच गोप्य सम्झौता भएको थियो, जसको चौथो बुँदामा आलो–पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो ।
समानताका आधारमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएकोमा केपी शर्मा ओलीले १५ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अब उनको अढाइ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन १५ महिना बाँकी छ ।
यसवीचमा सरकारले राम्रो काम ग¥यो र पार्टी सन्तुष्ट भयो भने ओलीलाई ५ वर्ष नै सरकार चलाउन दिने प्रचण्डले बताएका छन् । तर, ओलीलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न दिनका लागि पार्टी सञ्चालनको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने प्रचण्डको माग छ ।
जागरण अभियानका लागि प्रदेश क्षेत्रस्तरीय कार्यक्रम तय
संविधान दिवसका अवसरमा नेकपाले बिर्तामोडमा १५ हजार कार्यकर्ता भेला गर्दै मनाउने
कांग्रेसको देशब्यापी हिपतम जागरण अभियान शुरु